Uyithengisa njani kwiPinterest | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJuni 6, 2014 NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Akufanelanga ukuba kubekho isimanga sokuba imithombo yeendaba ebonakalayo iqhuba awona manqanaba aphezulu kuguquko kwintengiso ekwi-Intanethi… kwaye iPinterest ayikho ngaphandle. Kwi kufunda kwaShopify Ukuhlalutya ukutyelelwa kwezigidi ezingama-37, kwafumaniseka ukuba iPinterest ikhokelele i-US e-commerce rates zokuguqula.
Njengabathengi baphina kwaye baphinde baphinde baphinde baphume ngamakhulu ezigidi, abathengisi abaninzi bayasokola ukwandisa amandla abo ePinterest. Jonga esi sikhokelo sentengiso sePinterest kwaye uqalise ukuphina indlela yakho eya empumelelweni.
Uhlahlo-lwabiwo mali lweendaba zentlalo luqikelelwa ukuba luza kwenza i-18% yabathengisi bebhajethi yentengiso kule minyaka mihlanu izayo… okwenza iPinterest ibonakale njengotyalo-mali oluhle! Ukuqalisa, ukuba sele unayo iakhawunti yePinterest oza kuyidinga guqula loo nto kwiakhawunti yeshishini. Ngelo xesha, iakhawunti yakho iya kufumana izixhobo ezongezelelweyo kwaye ungasayinela izikhonkwane ezinyuselweyo. Intengiso emnandi!
tags: Bhengeza kwiPinterestkwenziwa kanjaniindlela yokubhengeza kwipinterestTwilleyIntengiso yePinterest
Umxholo: Isitshixo sokubulala iiPosti zeBlog